အမေရိကန်လေတပ်က မြို့ပြလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအား ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံ ပြောကြား - Xinhua News Agency
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ Hmeimim လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှ ရုရှားနိုင်ငံသို့ ဦးတည်ပြန်လာသော ရုရှားလေကြောင်းတပ်ဖွဲ့ လေယာဉ် ပထမအုပ်စုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လတွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မော်စကို ၊ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်လေတပ်၏ အန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ရပ်များသည် မြို့ပြလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအား ခြိမ်းခြောက်မှု တစ်ခု ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Maria Zakharova က ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Maria Zakharova က ပင်လယ်နက်ပေါ် အပါအဝင် ရုရှားနိုင်ငံနယ်စပ်အနီးတွင် မြောက်အတ္တလန္တိတ်စစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့(NATO)၏ လေယာဉ်များ အများအပြား ပျံသန်းမှု တိုးမြှင့်လာခြင်းအပေါ် အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်း တယ်လီဂရမ်ပို့စ်တစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန် CL 600 စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးလေယာဉ်တစ်စင်းသည် ရုရှားလေကြောင်းလုပ်ငန်း တာဝန်ယူထားသည့်ဧရိယာအနီး ပင်လယ်နက်အပေါ် အမြင့် မီတာ ၁၁,၀၀၀ မှ မီတာ ၉,၂၀၀ ထိ အောက်ဆင်း နိမ့်ချ ပျံသန်းခဲ့ကြောင်း နှင့် အရပ်ဘက်လေယာဉ်နှစ်စင်း၏ လမ်းကြောင်းများကို အနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကင်းထောက်လေယာဉ်မှူးများသည် ရုရှားလေကြောင်းလုပ်ငန်းထံမှ ကြိမ်ဖန်များစွာ ဆက်သွယ်ပြောကြားမှုအား တုန့်ပြန်ခြင်း မရှိကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Maria Zakharova က အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားလေကြောင်းထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်သူများသည် အရပ်ဘက်လေယာဉ်များ၏ ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်း နှင့် အမြင့်ပေအား ချက်ချင်းပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အရပ်ဘက်လေယာဉ်များ ဘေးကင်းရေးကို သေချာအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်း ၎င်းက ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ပယ်လယ်နက်ရဲ့ ရေပြင်ကျယ်အထက် ဝေဟင်ပေါ်မှာ အကယ်၍ အခု ကပ်ဘေးဆိုက်မှုတစ်ခုကို ရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာ အမေရိကန် နဲ့ နေတိုး အနေနဲ့ ဒဏ်ခတ်မခံရလေအောင် အန္တရာယ်ကြားက လူသားတွေရဲ့အသက်တွေကို ဆွဲထုတ်မှုလို့ အဓိပ္ပါယ်မသက်ရောက်ပါဘူး” ဟု သူ(မ) က ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီး လေကြောင်းအာဏာပိုင်များအနေဖြင့် သံတမန်လမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် ကန့်ကွက်မှု တင်ပြသွားမည်ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ (Xinhua)
Russia says U.S. air force threatens civil aviation
MOSCOW, Dec.5(Xinhua) — The dangerous actions of the U.S. Air Force have createdathreat to civil aviation, Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova said Sunday.
InaTelegram post, Zakharova expressed concern over the increased intensity of North Atlantic Treaty Organization (NATO) aircraft flights near the Russian border, including over the Black Sea.
She said that on Friday,aU.S. CL 600 surveillance plane descended from 11,000 to 9,200 meters over the Black Sea, near the area of responsibility of Russian air traffic services, and disturbed the routes of two civil planes.
The crew of the reconnaissance aircraft did not respond to repeated requests from the Russian air traffic services, Zakharova stressed.
The Russian air traffic controllers ensured the safety of the civil planes by promptly changing their direction and altitude, she recalled.
“If nowacatastrophe has been averted in the airspace over the open waters of the Black Sea, this does not mean the United States and NATO can further put people’s lives at risk with impunity,” she wrote, noting that the aviation authorities will lodgeaprotest through diplomatic channels. Enditem
Photo – A screenshot taken on March 15, 2016 from Russian Defense Ministry video shows the first group of Russian Aerospace Force aircraft heading back to Russia from Hmeimim, Syria, on March 15, 2016. (Xinhua/Sputnik)